अमेरिका मा सफ्थवेर इन्जिनियरिङ इन्ट्रन
आज मेरो काम को दोस्रो दिन ! अलिकति उत्साहि अनि आलिकति डर साथ बित्यो । मेरो पद सफ्थवेर इन्जिनियरिङ इन्ट्रन भनेर दिइयको रहेछ।आज औपचारिक रुपमा बिभागिय मिटिङ्ग मा मेरो परिचय गराइयो । करिब ५० जना गोरा अनहार हरु को बिचमा मेरो अनुहारले कता कता सबैलाइ कौतुहलताले घेरिदियको थियो। मेरो सुपरभाइजरको पनि बोस अथवा भनौ मेरो बिभगिय प्रमुखले मेरो सुपरभाइजरलाइ मेरो परिचय गर्ने अनुमति दिय पछि मात्र मेरो सुपरभाइजरले मेरो सबै सामु आधिकरिक परिचय गरायो। म उठेर सबै लाइ हाइ भने र खालि मेरो सुपरभाइजरले राखेका मेरा परिचयका बाक्य हरुमा टाउको हल्लायर समर्थन जनाइरहे ।
मेरो काम अलिकति डरलाग्दो नै छ । जावा भन्ने प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग गरेर यउटा नया प्रोग्राम बनाउनु पर्नेछ र यसलाइ “ MNGP AOV Data Base Management System” नामाकराण गरियको छ र यो प्रोजेक्ट म एक्लैले सकनु पर्ने हुन्छ । अलिकति डर लागेको छ कतै बिचमा गएर सकिन्न कि भनेर, तर पनि यत्रो सिङ्लो मान्छे अनि मेरो प्रिय इन्टरनेट साथमा हुदा कसो नसकियला जस्तो लाग्छ ।अनि पुरा आत्म बिश्वाश जागेर आउछ , “म सक्छु “।
म यो कम्पनि अर्थात Monticello Nuclear Power Plant मा मिति जुन ४ तारिख देखि काम सुरु गरेको हुं ।यो मिनिसोटा स्टेट को मोन्तेसेलो भन्ने सहरमा छ। यो कम्पनि को काम भनेको युरोनियम प्रसोधन गरेर बिजुलि निकाल्ने हो । नेपाल को जस्तो पानि बाट यहा कमैमात्र बिजुलि निकलिन्छ। यहा बिजुलि को लागि पानि नभय पनि हुन्छ । मैले काम गर्ने ब्रान्च मा ८०० जना कर्मचारि छन अरे र मेरो बिभाग भने को इन्जिनियरिङ बिभाग को आइ टि सह बिभाग हो । मेरि हप्ता मा ४० घन्टा काम गर्नु पर्छ ।बिहान ७ देखि ९ बजे सम्म जतिखेर पुगेपनि हुन्छ र तेस पछि ८ र १।२ घन्टा अफिस मा नै बस्नु पर्छ (८ घन्टा कामको र १।२ घन्टा लन्चको लागि ) ।त्यो १।२ घन्टा लन्च (खाना खाने समयको) पैसा पाइदैन र हप्ता मा ४० घन्टा को मात्रै पैसा पाइन्छ । यो मेरो पहिलो काम भयकोले मैले धेरै दर मा काम गरेको छैन । मेरो प्रति घन्टा २१ यु यस डलर(रु. १४७० @ १ डलर - ७० ने रु।) हुन्छ ।काम भयको दिन भरि कुर्सि मा बसेर प्रोग्राम लेख्ने हो ।
यहा अमेरिका मा काममा इमानदार र दक्ष हुनु पर्छ ,नत्र थाहनै नपाइ निकालिदिन्छन । WIFE ,WORK and WEATHER (स्वास्नि, काम र मौसम) को ठेगान हुदैन यहा तेसै ले यिनि हरुको भर परिहाल्न हुदैन, हेरौं मेरो काम ले सायद साथ नछोड्ला।
बिश्व पौडेल, हाल अमेरिका